ဗဟိုဘဏ်၏ အစည်းအဝေးတိုင်းက ငွေကြေးအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါဟာအမြဲလိုလိုပဲ ဤအစည်းအဝေးများပြီးတဲ့နောက် တစ်နေ့တာအတွင်း အပြောင်းအလဲကြီးတွေရတဲ့အခါနှင့် အဓိက Forex ရေစီးကြောင်းတွေပြောင်းလဲတဲ့အခါ ဖြစ်လေ့ရှိနေကြပါ။ ဗဟိုဘဏ်မှ အတိုးနှုန်းတွေကို ကြေငြာပါသည်။ နှုန်းအနိမ့်တွေက ငွေကြေးတန်ဖိုးကျဆင်းစေချိန်မှာ နှုန်းမြင့်တွေက ငွေကြေးအတွက် အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်ပါသည်။ epreciate.
ရောင်းဝယ်သူတော်တော်များများက အင်္ဂလန်ဘဏ်ကို ဒီနှစ်ထဲ အတိုးနှုန်းမြှင့်ပေးစေချင်ကြပြီး ဧပြီလလယ်အထိ ဗြိတိန်ပေါင်သည် အမေရိကန်ဒေါ်လာတက်တာနှင့်အပြိုင် လိုက်မြင့်လာခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တော့ အခြေအနေပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ ဗြိတိန် စီးပွားရေး အညွှန်းကိန်းသည် ပိုဆိုးလာပြီး၊ အတိုးနှုန်းမြင့်တက်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်များသည်လည်း မှေးမှိန်ကာ GBP/USD ကျဆင်းခဲ့သည်။
မေလကုန်တွင် အင်္ဂလန်ဘဏ် အကြီးအကဲ Mark Carneyမှ ယခုနှစ်၏ Brexit စေ့စပ်ဆွေးနွေးခြင်းများသည် အပေးအယူမကောင်းတဲ့ ရလဒ်ရှိခဲ့လျှင် ဗြိတိန် စီးပွားရေးကို အားတက်စေအောင် ဆွဲတင်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အင်္ဂလန်ဘဏ်သည် စိုးရိမ်နေရသည့်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ ပေါင်အပေါ် သက်ရောက်မှုသည် အလွန်ကို အနှုတ်လက္ခဏာဖြစ်နေသည်။
ဗြိတိန်ဗဟိုဘဏ်၏ အစည်းအဝေးအသစ်သည် Forex ရောင်းဝယ်သူများအားလုံး၏ အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ပေါင် ရောင်းချမှုကို လမ်းပြမည့်အခြား အချက်ပြချက်ကို ပေးမည်လား? ဇွန်လ ၂၁ရက်နေ့ ၁၄:၀၀ MT အချိန်တွင် တွေ့ရှိပါလိမ့်မည်။
• အင်္ဂလန်ဘဏ်မှ အပြုသဘောဆောင်လျှင် ဗြိတိန်ပေါင် ဈေးတက်လိမ့်မည်။
• အင်္ဂလန်ဘဏ်မှ အနုတ်သဘောဆောင်လျှင် ဗြိတိန်ပေါင် ဈေးကျလိမ့်မည်။